निसानका यी अभागी बाबु जो मलेसियाबाट काठमाडौ आई सिधै छोराको चितामा आगो लगाउन आर्यघाटमा पुगे ! - Purbeli News
निसानका यी अभागी बाबु जो मलेसियाबाट काठमाडौ आई सिधै छोराको चितामा आगो लगाउन आर्यघाटमा पुगे !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५ समय: १४:४१:००
सिन्धुपाल्चोक ज्यामिरेका गणेशबहादुर खड्का ११ वर्षे छोरा निसान खड्काको मृत्यु भएको ४ दिनपछि प्रदेशबाट काठमाडौं आए। उनी बिहीबार अपरान्ह मलेसियाबाट काठमाडौं ओर्लिएका थिए।छोरा निसानको भविष्यका लागि मलेसियामा रोजगारका लागि गएका गणेशले घटनाको जानकारी पाएपनि भन्दासाथ आउन पाएनन्। त्यहाँ समेत उनी मन बाँधेर बसे।
खड्काको सपना थियो छोरा निशानलाई ‘ठूलो मान्छे’ बनाउने । एउटा मात्रै छोरा निशानको उज्यालो भविष्यका लागि उनी विगत तीन वर्षदेखि मलेसियामा रगत र पसिना बगाईरहेका थिए ।विडम्वना ! उनको सपनाको जहाज सुरक्षित अवतरण हुन पाएन । तर, आफ्नै नियतिस्तो गह्रंगो मन बोकेर उनी चढेको जहाज भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित आपुग्यो । र, गणेश एअरपोर्टबाट सिधै आर्यघाट पुग्नुपर्ने नियतिको भागिदार बने ।
अपहरणकारीले विभत्स हत्या गरेका निसानको शव सोमबारदेखि शिक्षण अस्पतालमा थियो। उनका मावलीहरुले बिहीबार शब बुझे। अस्पतालबाट शव पशुपति आर्यघाट लगियो।
पशुपति आर्यघाटमा छोराको पार्थीव शरीर खरानी बन्दै गर्दा गणेशबहादुरले मन थाम्न सकेनन् । दुनियाँमा यस्ता कुनै बाबु हुँदैन, जसले छोराको लाश आफ्नै अघि खरानी भएको हेर्न सकोस् । आमा चमेलीको अवस्था झन् बेहाल थियो ।
आर्यघाटमा गणेशमात्र होइन, उपस्थित सबैका आँखा ओभानो रहेनन्। हजुरबुवा दुर्गाबहादुर खड्काले निशानको शवमा दागबत्ती दिए। आमा चमेलीलाई सम्हाल्न पनि सम्हालिन गा¥हो परेको थियो। उनलाई केही आफन्तहरुले सम्हालिराखेका थिए।